Čezeta Type 506 / 02 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါကို Type 506 / 02 ထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံကို Type 506 / 04 A1 ဖြင့်အစားထိုးသည်။
အဆိုပါČezetaအမျိုးအစား 506 ကုမ္ပဏီထံမှကျော်ကြား Scooter တစ် Re-လူ့ဇာတိဖြစ်ပါတယ် Čezeta ချက်သမ္မတနိုင်ငံကနေ။
အဆိုပါČezeta Scooter မော်ဒယ် Post-စစ် '' အာကာသ-အသက်အရွယ် '' ဒီဇိုင်းကာလအတွင်း 1950 ခုနှစ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးချက်ကိုစလိုဗက်Čezetaအင်ဂျင်နီယာများ၏စံပြ '' ဘီးနှစ်ဘီးပေါ်တွင်ကား '' နှင့်တူအဆင်ပြေရာတစ်ခုခုကိုဒီဇိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ကြောင်းစိတ်ကူး မှစ. Čezetaရဲ့အထင်ကရ Scooter ဒီဇိုင်းက၎င်း၏ကျော်ကြားဒုံးပျံပုံသဏ္ဍာန်သို့ပြောင်းလဲ – နှစ်ခုအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကြာမြင့်စွာထိုင်ခုံအတူ။
အဆိုပါČezetaအမျိုးအစား 506 လျှပ်စစ်မော်တာစွမ်းအားဖြင့်၎င်းČezetaဒီဇိုင်း၏နောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အမွေကိုဆက်လက်။
အဆိုပါ Scooter တစ်လီသီယမ်နှင့်အတူသည် Panasonic က အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့်ဘက်ထရီအကောင်းဆုံးကြာရှည်ခံမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ Scooter ပေးတက်စလာမော်ဒယ်အက်စ်၌ရှိသကဲ့သို့ 120-150km တစ်အကွာအဝေး, တူညီတဲ့ဘက်ထရီဘက်ထရီ။
အမျိုးအစား 506/01 နှင့်အမျိုးအစား 506/02: အဆိုပါ Scooter နှစ်ခုမော်တာများနှင့်ဘက်ထရီဗားရှင်းနဲ့အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဗားရှင်း 506/01 အဆိုပါအမျိုးအစား 80km တစ်အကွာအဝေးတစ်ခု 4kWh ဘက်ထရီနှင့် 8kW (max ကို) 4.5 စက္ကန့်အတွင်း 0-50km / ဇနှင့် 85 ကီလိုမီတာ / ဇ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းတစ်ခုအရှိန်အဘို့လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
ဗားရှင်း 506/02 အဆိုပါအမျိုးအစား 120-150km တစ်အကွာအဝေးတစ်ခု 6kWh ဘက်ထရီနှင့် 11kW (max ကို) 2.7 စက္ကန့်အတွင်း 0-50km / ဇနှင့် 115 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းတစ်ခုအရှိန်အဘို့လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
Čezetaအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အဆိုပါ Scooter2နှစ်သို့မဟုတ် 40,000 KM အာမခံ 1 နှစ်နှင့်အတူသည် ဥရောပကူညီစောင့်ရှောက်ရေး တစ်Čezetaမှပျက်ပြားအကူအညီများသို့မဟုတ် Scooter ၏ပြန်လည်နာလန်ထူရန်လိုအပ်ပါသည်အဖြစ် 50 ကီလိုမီတာပေါင်းမီးရထား / ဘတ်စ်ကား မှစ. ခရီးအိမ်သို့ Service ကို partner နှင့်မြင်းစီးသူရဲကိုများနှင့်ခရီးသည်တင်တက္ကစီတက်ဘို့ Authorized ။
အဆိုပါဝယ်ယူသင်တို့ကိုလည်းစီစဉ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရာအားလုံးများအတွက် 1-တစ်နှစ် 24/7 ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလက်ထောက် (concierge အကူအညီများ) တို့ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ Scooter5နှစ်သို့မဟုတ် 100,000km ၏လွှမ်းခြုံများအတွက်တိုးချဲ့အာမခံနှင့်အတူအမိန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter လက်တွေ့ကျကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လျှပ်စစ်တဦးတည်းရေနံစသောအပြောင်းအလဲလောင်စာ filter များ, မီးပွားပလပ်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထုတ်လွှတ်စစ်ဆေးမှုများအဘယ်သူအားမျှနှင့်Čezetaအမျိုးအစား 506 နှင့်အတူပင်ဘရိတ်အကျိုးရှိစွာ regnerative ဘရိတ်မှတဆင့်ဒီထက်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့များမှာလိုအပ်သည်။
အဆိုပါ Scooter တစ်ခုသုံးပြီးကိုယ်ပိုင်နိုင်ပါတယ် အွန်လိုင်း Configuration ။ အဆိုပါ Scooter သင်္ဘောများကမ္ဘာကကျယ်ပြန့်။
ကို 2020 Čezeta ကိုမော်ဒယ်များ
Čezeta ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။